အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: အညတရ
နောက်တော့ လိုတာဖျက်ပြင် ပိုလျော့ တည်းဖြတ်က တီအရင်proof လုပ်ရပါတယ် ပြီးတော့ မှ သူကပြန်ကြည့်ပြီး အင်း.....ဒီနေရာမှာတော့ ဒီလိုဆို ပိုကောင်းမယ် ဟ ဒါလေးတော့ဖြုတ်လိုက်တော့ စသဖြင့်ပြောတတ်ပါတယ် နောက် နာမည်............ကဗျာ နာမည်ကိုလဲတီကရွေးတာများပါတယ် သူက ကြိုက်မကြိုက်ပြောတာပဲ (ရှားပါးလွန်းတဲ့) တခါတလေမှ သူက အကြံပြုတတ်ပါတယ် များသောအားဖြင့် တီပေးတဲ့နာမည် သူကြိုက်တာများပါတယ် အဲ့လိုပေါ့
Posted by တီချမ်း at 8:02 PM
The Melody 13 December 8, 2009 at 8:32 PM
Hey, I just forget to say that;
"Your introduction is SUPER CUTE and our poem is BRILLIANT!!!"
အန်တီချမ်း December 8, 2009 at 8:36 PM
သြော် ငပေါကောင်နဲ့ ငပေါမ (အဲလေ)
The Melody 13 December 8, 2009 at 8:38 PM
ငါတို့က တော်ကိုတော်လွန်းနေတာ အဟိ :D
နင်နဲ့တွေ့မှာ ငါ့ရဲ့ Third Eye Philosophy ရူးသွပ်မှု အသစ်အကြောင်း ဝေမျှဦးမယ်။ ဟဲဟဲဟဲ ... နားညည်းဖို့သာပြင်ထား
အန်တီချမ်း December 8, 2009 at 8:49 PM
အမေမွေးကတည်းက ဒီလိုတော်နေတာတော့ ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းပေါ့ဟာ
ကြားထဲမှာ အလာရဲ့ ဘလက်ဇင်းနဲ့ ဗုဒ္ဓ ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေလဲပါမှာပေါ့နော်
လာလေ နင့်ရဲ့တတိယမျက်လုံးမဟာ ဒဿန ကို ငါက မေချောက်ချမ်း ရဲ့ ရေခဲတောင် အတွင်းအားနဲ့ ချေဖျက်မယ်
(ထို့နောက် အဆင့်မြင့် သိုင်းပညာရှင် မေချောက်ချမ်း မှ မည်သို့လုပ်လိုက်သည်မသိ မိဘုတ်ဆုံမှာ ကားယားလဲလေသည်)
အန်တီချမ်း December 8, 2009 at 8:50 PM
စကားမစပ် သူကလဲ မယ်လိုဒီ ၁၃ ကိုကျော်ငြာသေးတာနော်
ဒီလို သူများရဲ့ မိတ်ဆွယ်တာတော့
အန်တီချမ်း December 8, 2009 at 9:45 PM
8:16 PM me: hey it out
BS: what ?
me: my blog
8:27 PM me: how was it?
BS: your intro is Super cute and our poem is Brilliant !
8:28 PM me: and u didn't comment about it
me: ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်အုံးလေဟာ
BS: i'll add that sentence
8:33 PM hey if if open my gmail account in the same window with blogspot, i can comment very easily
me: သြော် ခုမှသိလား
8:34 PM BS: ကျုပ်တို့ရွာမှာ ရှင်တို့ဘလော့ခ်တွေ မသုံးဘူးအေ
8:35 PM me: မမြင်ရဘူး
8:36 PM ပြန်ကြည့်လိုက်
8:41 PM ငါပြန်ရေးထားတယ်
8:42 PM me: နင်မပြီးတော့ဘူးလား
8:43 PM me: ဘုရားဘုရား မကြားလိုပါ အမယ်မင်းရဲ့ မကြားလိုပါ ဖခင်ဘုရာင်ကြီးမှာ မကြားလိုပါ....................
me: ဘာလဲဟ တတိယမျက်လုံးဒဿန ဆိုတာကြီးက
me: အဲ့တာ ခမမ နဲ့ ပေါင်တာများလို့နေမှာ
BS: လာမယ်လေ လာမယ်
8:44 PM ဟဲ့
me: အင်ပေါ့လေ ပြောပေါ့
me: ငါသူ့ကို ဖော်ဝပ်ပေးမှာပဲ ပြောသာပြော ပြောသာပြော ပြောသာပြော
8:45 PM ငါ့ကိုသတ်ချင်ရှာမှာအေ့
8:49 PM me: သူငယ်ချင်း ပြန်လာကြည့်ပေအုံးလော့ ငှဲငှဲ
8:50 PM me: ခွိခွိခွိ
8:51 PM BS: ဟားဟားဟား
ဟဲ့ နင်ကမ ကုမရအောင်ကြောင်တာ
8:52 PM me: အံမယ်
SHWE ZIN U December 8, 2009 at 9:49 PM
ကဗျာလေးက modern ကဗျာလားဗျာ ကျနော်က modern ဆိုကြောက်တတ်လို့ပါ
တေဇာ December 8, 2009 at 9:59 PM
အဲဒါအရမ်းလှတယ်... “ဖောက်” .... ;P
Bino December 9, 2009 at 1:50 AM
Don't be trouble yourself.
Insufficient sleep can kill you.
ILO had enforced rest our regulations for worker.
You have to sleep to rest and relax.
Bino December 9, 2009 at 1:53 AM
Correction for spelling
read hour for our
minimum rest hour = 10hr rest for 24hrs period.
နန်းညီ December 9, 2009 at 12:25 PM
“နင်နဲ့တွေ့မှာ ငါ့ရဲ့ Third Eye Philosophy ရူးသွပ်မှု အသစ်အကြောင်း ဝေမျှဦးမယ်။ ဟဲဟဲဟဲ ... နားညည်းဖို့သာပြင်ထား” တဲ့
ကဗျာကတော့ ပြောစရာမရှိပါ.. သဘောကျမိပါသည်
အန်တီချမ်း December 9, 2009 at 3:21 PM
ကျေးဇူး တေဇာ မိညီမ ကိုဘီနိူ
ကိုဘီနိူရေ တကယ်က တီအိပ်တာ နားတာ ၂၄ နာရီစက်ဝန်းမှာ ၁၀ နာရီမကပါဘူး ဟိဟိဟိ
မနေ့ဆိုရင် အိပ်တာ မနေ့ကည ၁၁ နာရီလောက်ကနေ ဒီနေ့မနက် ၁၁ နာရီအထိပါ
ဘောစ့်မောင် ဖုန်းဆက်နှိုးရတယ် ဟိဟိ
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာစနေ တနင်္ဂနွေကလဲ အိပ်တာ ၃ရက်ကို စုစုပေါင်း နာရီ ၅၀ ကျော်လောက်ရှိတယ်
တီ စီဒီ ဖိုးလဲကောင်းနေပါတယ်
ဒါပေါ့ ကံကိုယုံပြီးတော့ တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပစ်မထားပါဘူး
အန်တီချမ်း December 9, 2009 at 3:33 PM
အော် ဆော်တီး ရွှေဇင်